टेम्के भ्यु टावर शिलन्यास, विवादमा मुख्यमन्त्री | ABC KHABAR
Home मुख्य समाचार टेम्के भ्यु टावर शिलन्यास, विवादमा मुख्यमन्त्री
खोटाङ, २५ कातिक । खोटाङ र भोजपुर जिल्लाको सिमानमा रहेको टेम्के भ्यु टावरको शिलन्यास कार्यक्रममा आएका प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई विवादमा परेका छन् । सोमबार टेम्के डाँडामा पुगेर भ्यु टावरको शिलन्यास गर्दा एकपक्षिय हिसाबले कार्यक्रम गरेको भन्दै उनि विवादमा परेका हुन् ।
मुख्यमन्त्री राईले भ्यु टावरको शिलन्यास गर्दा दुईवटै छिमेकी जिल्ला भित्रका स्थानीय गाउँ पालिकालाई जानकारी दिनु सम्म नदिएको गुनासो आएको छ । भोजपुर जिल्लाबाट प्रदेश सभामा निर्वाचित भएर मुख्यमन्त्री बनेका राईले टेम्केलाई भोजपुरको मात्रै हो भन्ने जस्तो गरेर कार्यक्रम गर्नु दुख लाग्दो भएको स्थानीय साकेला गाउँ पालिकाका अध्यक्ष अर्जुन खड्काले गुनासो गरेका छन् । उनले भने पानीढोला सिमाना भएको टेम्केको आधाभाग आफ्नो गाउँपालिकामा रहेको भन्दै यसको प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रममा जानकारी सम्म नदिनु अचम्म भएको उनको भनाई रहेको छ । खड्काका अनुसार टेम्के डाडाँ आफैमा करिब ३१ सय मिटरको उचाईमा रहेको टावर हो । यसमा दुईतलाको टावर बनाएर प्रदेश सरकारले हाँसी मजाक गरेको प्रतिकृया दिएका छन् ।
यस्तै खोटाङ जिल्लाबाट प्रदेश सभा सदस्य रामकुमार राई पासाङले टेम्केमा पहिलेनै टावर बनाउने अभियान शुरु भएको जानकारी दिएका छन् । किरात गणतान्त्रिक भ्यु टावरको नामाकरण गरेर तत्कालिन नेकपा माओवादी नेता गोपाल किरातीको पहलमा निर्माण अभियान शुरु गरिएको उनले सम्झाएका छन् । उनले भने, ‘त्यस बेला ३३ तलाको ३ सय ६५ मिटरको उचाईमा रहेको ऐतिहासिक टावर निर्माण गर्ने भनिएको हो । तर पछि अभियानले सार्थकता पाएन ।’ तत्कालिन किरात गणतान्त्रिक भ्यु टावर निर्माणका लागि फाउण्डेशन नै बनाएर अभियान शुरुवात गरिएको थियो ।
सांसद राईका अनुसार प्रदेश सरकारले यो टावर निर्माण गर्न तदारुकता देखाउँदा पनि आफुले यसको नाम किरात गणतान्त्रिक भ्यु टावर हुनुपर्ने माग राखेको बताए । उनले टावर निर्माण गर्दा कम्तीमा ७ तला सम्म बनाईनु पर्ने साथै खोटाङ र भोजपुरको साझा स्वामित्वमा निर्माण गरिनु पर्ने कुरा सदनमै उठाएको उनले बताए । तर मुख्यमन्त्रीको ठाडो हस्तक्षेप सहित एकाङ्गी पाराले दुईतले टावर निर्माण गर्न लागिएकामा आफुहरुको असहमती रहेको समेत उनको भनाई छ । यस्तै खोटाङबाटै निर्वाचित प्रतिनिधी सभा सदस्य विशाल भट्टराईले पनि शिलन्यास कार्यक्रमप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । खोटाङ र भोजपुरको साझा भुगोलमा टावर बन्दै गर्दा खोटाङका जनपं्रतिनिधीहरुसँग परामर्श समेत नभएको भन्दै उनले गुनासो गरेका हुन् । शिलन्यास टेम्के भ्यु टावर भन्ने कार्यक्रम भोजपुरको अन्नपुर्णमा गर्ने ? उनले प्रश्न गरेका छन् । गृहजिल्ला खोटाङमै रहेका सांसद भट्टराईले खोटाङका कसैलाईपनि खबर नगरेको भन्ने बुझेपछि एकापक्षिय जस्तो देखिएको कार्यक्रममा आफुले जानेर नै सहभागी नभएको बताएका छन् ।
यस्तै भोजपुरकै प्रदेश सभा सांसद राजेन्द्र राईले मुख्यमन्त्री राईले देखाएको व्यवहार केटाकेटी खेले जस्तो भएको बताए । आफुलाई ११ बजेको कार्यक्रम भनेर बोलाउने, खबर गराउने अनि नौ बजे नै आएर कार्यक्रम सकेर फर्कने व्यवहार केटा केटीको जस्तो भएको उनको भनाई छ । उनले टेम्के भ्यु टावरको शिलन्यास कार्यक्रममात्र नभएर आईतबार भएको कार्यक्रममा समेत यसरी नै छक्काएको बताएका छन् । उनले भने ‘मुख्यमन्त्री ज्युले बाहिरबाट आउने प्रश्नहरुको सिर्जना किन गरिरहनु भएको छ थाहा भएन, सायद बुद्धी पुगेन कि? नत्र त छेउ छाउमा हामी जतिका नेताहरु उभिदा कम्तीमा अरु सांसदको पनि साथ रहेको रहेछ भन्ने सन्देश त जान्थ्यो होला । यसले उहाँलाई नै मद्यत पुग्दो हो । ’
यस्तै भोजपुरबाट प्रतिनिधी सभा सांसद सुदन किरातीले भने कार्यक्रमको बारेमा मेसो नपाएको सुनाए । आफु जिल्लामै निर्धारित कार्यक्रममा सुदुर भेगतिर रहेको बताउँदै मुख्यमन्त्रीले कार्यक्रमका बारेमा केही खबर नगरेको बताएका छन् । एक्लै दौडेर फस्ट हुने रणनीतिका आधारमा कार्यक्रम गरिएको पो हो की भन्ने आशंका व्यक्त गर्दै समृद्धीको बाटोमा सबैले उतिकै पहल लिनुपर्ने उनको भनाई रहेको छ ।
शिलन्यास कार्यक्रमपछि सामाजिक सञ्जालमा समेत मुख्यमन्त्रिको आलोचना शुरु भएको छ । उनलाई भोजपुरको प्रदेश सभा सासंदमात्र नभएर प्रदेशकै मुख्यमन्त्रीको हैसियतमा बस्न समेत सामाजिक सञ्जाल संचालकहरुले सुझाव दिन थालेका छन् । भने अर्काथरीले नेकपा विवादमा रहेकोबेला गुट रक्षाकोलागि दौडाहा गरेको भन्न समेत भ्याई सकेका छन् ।
Previous articleकोरोना सङ्क्रमण : डर, त्रास र अनुभूति: विकल श्रेष्ठ
Next articleकोरोना जोखिम घटाउन देउसी भैलो नखेल्न प्रशासनको आग्रह